ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တက္မေရနံေျမတြင္ ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ၿပီး ေရနံတြင္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ေလာင္း ပိတ္ဆို႔ - Mandalay In-depth
ညောင်ဦးမြို့နယ် တက်မရေနံမြေတွင် ပုဒ်မ(၁၄၄)ထုတ်ပြန်ပြီး ရေနံတွင်းများကို ကွန်ကရစ်လောင်း ပိတ်ဆို့
Mg Tar နိုဝင်ဘာ 15, 2019 2:04 မနက် 0
ငလျှင်လှုပ်ပြီးချိန် ရေနံပိုထွက်လာသော တက်မရေနံမြေတွင် တရားဝင် တူးခွင့်ရရန် လျှောက်ထားသူ (၅၀)ခန့် ရှိဟုဆို
ညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တက်မရေနံမြေတွင် တရားမဝင် ရေနံတူးဖော်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ကာ တားမြစ်ထားပြီး ရေနံတွင်းများကိုလည်း ကွန်ကရစ်လောင်း ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တက်မရေနံမြေသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ် တောင်ဘီလေးကျေးရွာအုပ်စုနှင့် တက်မကျေးရွာအုပ်အတွင်း တည်ရှိသည်။
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် တက်မရေနံမှော်ရှိ အဆောက်အဦးများကို အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံဖျက်သိမ်းနေစဉ်။ Photo – တက်မရွာFB.
အဆိုပါ ရေနံမှော်အတွင်း ကုမ္မဏီများ၊ ဒေသခံများနှင့် အခြားဒေသမှ လာရောက်သူများက တရားမဝင် ရေနံတူးဖော်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်းနှင့် အခွန်အခ ဆုံးရှုံးခြင်း စသည်များကြောင့် တရားမဝင် ရေနံတူးဖော်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် ညောင်ဦးမြု့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်ထွန်းက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ နိုဝင်ဘာ(၄)ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ(၃)ရက်အထိ တစ်လသက်တမ်းရှိ တားမြစ်မိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တက်မရေနံမြေအတွင်း ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ချက် စိုက်ထူထားစဉ်။ Photo – တက်မရွာFB.
တက်မရေနံမှော်အတွင်း တရားဝင် ရေနံတူးဖော်လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ညောင်ဦးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့်ခိုင်က ပြောသည်။
“မြေငလျင်လှုပ်ပြီး ရေနံတွေက ထွက်လာတော့ မြေကြီး အရှုပ်အရှင်းတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အထပ်တွေ တွေ့တယ်။ တိုင်တာကလည်း အရမ်းများလာတယ်။ မြေစာရင်းကလည်း မြေပြင်ကွင်းဆင်းတော့ မြေထပ်နေတာတွေ တွေ့တယ်။ ရှင်းဖို့ရာ မလွယ်တော့ လုပ်ကွက်တွေ အကုန်ပိတ်သိမ်းထားပြီး ရှင်းဖို့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရကို စာတင်ပြီး ထုတ်ပြန်တာ”ဟု ဦးဝင်းမြင့်ခိုင်က ပြောသည်။
ပုဂံဒေသရှီ စေတီပုထိုး အများအပြား ပျက်စီးစေခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ငလျှင်နောက်ပိုင်း တက်မရေနံမြေတွင် ရေနံများ ပြန်လည် တူးဖော်ထွက်ရှိလာရာ ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း လာရောက်တူးဖော်လုပ်ကိုင်သူ ပိုမိုများပြားလာသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လက်မှတ်ရေးထိုးကာ နိုဝင်ဘာ(၄)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၄၄ တားမြစ်မိန့်ကို တက်မရေနံမှော်အတွင်း စိုက်ထူထားပြီး အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တရားမဝင် ရေနံတူးဖော်သူများအနေဖြင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဖြုတ်သိမ်းယူဆောင်ကာ ရေနံမှော်အတွင်းမှ ၇ရက်အတွင်း ထွက်ခွာသွားရန် သတိပေးထားသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
“အခု မှော်ထဲမှာ လူတွေ မရှိတော့ဘူး။ တွင်းတွေ ဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီး ပြန်ကုန်ကြပြီ” ဟု တက်မရေနံမြေဖြစ်သည့် တောင်ဘီလေးကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်းက နိုဝင်ဘာ(၁၅)ရက်တွင် Mandalay In-depth News သို့ ပြောသည်။
တားမြစ်မိန့် မထုတ်ပြန်မီက တက်မရေနံမှော်အတွင်း ရေနံတူးဖော်ထုတ်ယူနေသည့် ရေနံတွင်းအရေအတွက် (၃၀၀)ကျော်အထိ ရှိနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ခန့်မှန်းသည်။
လက်ရှိတွင် တက်မရေနံမှော်အတွင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး စက်ကိရိယာများ ဖြုတ်သိမ်းထားခြင်း မရှိသည့် ရေနံတွင်းအချို့ကို ဆက်လက်တူးဖော်မည့် စိုးရိမ်သည့်အတွက် ကွန်ကရစ်လောင်းကာ ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း လွှတ်တော်အမတ် ဦးဝင်းမြင့်ခိုင်က ဆိုသည်။
ကွန်ကရစ်လောင်း ပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း တရားဝင် ခွင့်ပြုချိန်တွင် ရေနံ ပြန်လည်တူးဖော် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားဟု ၎င်းက ပြောသည်။
တက်မရေနံမှော်အတွင်း ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ညောင်ဦးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်ထွန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ “ ခရိုင်က ဦးစီးပြီး လုပ်တာပါ၊ မြို့နယ်အနေနဲ့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။ ညောင်ဦးခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးတင့်ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်မူ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိဘဲ အစည်းအဝေးလုပ်နေဟုသာ ပြောသည်။
တက်မရေနံမှော်အတွင်း တရားဝင် ရေနံတူးဖော် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားမူ ကုမ္မဏီ(၅)ခုအပါအဝင် လျှောက်ထားသူ (၅၀)ဦးခန့်ရှိပြီး မန္တလေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်နေသည်ဟု သိရှိထားရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
သို့သော် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးတိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ မရသေးပါ။
တက်မရေနံမြေတွင် ရေနံတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းများကို မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းက ၁၉၈၀ ကာလများတွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေသိန်းသန်းကမ္ဘာဆိုသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္မဏီတစ်ခုက မြေဧက ထောင်နှင့်ချီကာ လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထား၍ ရေနံတူးဖော် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။